आजको बजारमा करेक्सन आउनुको यस्तो छ प्राविधिक कारण ? « Nepal Bahas
आजको बजारमा करेक्सन आउनुको यस्तो छ प्राविधिक कारण ?
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १७:०९
१३ कार्तिक, काठमाडाैं । हिजो बजारमा देखिएको आकर्षक वृद्धिलाई आजको बजारले साथ दिन सकेन । नेप्से परिसूचक १ दशमलव ७८ अंकले घट्दै १६४५ दशमलव ६७ को विन्दुमा बन्द भएको छ । वाणिज्य बैंक उपसुचकमा करेक्सन आउँदा समस्त बजारलाई नै प्रेसर पुगेको हो ।
आज १९२ कम्पनीको शेयर कारोवार हुँदा ३ अर्ब ०३ करोडको शेयर कारोवार भएको छ । नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ । बजार १६६१ दशमलव ६४ को विन्दुमा खुलेकोमा बजारको उच्च विन्दु १६६३ दशमलव ४१ रहेको छ। बजारले १६४० दशमलव ४८ को न्यून विन्दु समातेको थियो ।
आजको बजार १६६३ को विन्दु सम्म पुगेर फर्किएको छ । वर्ष २०२० को मार्च महिनामा बजार ईण्ट्राडे मा १६६७ को विन्दुबाट फर्केको थियो भने आज पनि त्यही विन्दुको वरिपरिबाट बजार फर्केको छ । यसको अर्थ प्राविधिक भाषामा आजको यो क्षेत्र एउटा प्राविधिक प्रतिरोधको रुपमा अघि सरेको छ । बजारको बुलिस सेन्टिमेन्टमा यस्ता प्रकारका प्रतिरोधमा बजारले सामान्य संघर्ष गर्ने गरेको पाईन्छ।